यी नेपाली महिला दुबईमा अ’लपत्र ,कतैै तपाई‌ले चि’न्नु पाे भएको छ कि ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी नेपाली महिला दुबईमा अ’लपत्र ,कतैै तपाई‌ले चि’न्नु पाे भएको छ कि ?
यूएई ,यूएईको दुबईमा एक नेपाली महिला मा’नसिक स’न्तुलन गु’माएको अवस्थामा भेटिनुभएको छ । कतैै तपाई‌ले उ’हाँलाई चि’न्नु पाे भएको छ कि ? अ’रबी भाषा प्र’ष्ट बोल्न जा’न्ने ती महिलाको नाम यामकुमारी थापा र उमेर ४६ वर्ष भएको स्था’नीय सामाजिक अभियन्ता लै’ला अ’बु ब’करले जानकारी दिनुभएको छ । नेपालमा उहाँको ठेगाना र दुबईमा काम गर्ने ठाउँबारे कुनै प’त्तो लाग्न सकेको छैन ।सामाजिक अभियन्ता ब’करकाअनुसार यमकुमारीले २०१९ को अक्टोबरमा दुबई अस्पतालमा म’स्तिष्कको श’ल्यक्रिया गर्नुभएको थियो । त्यसपछि यामकुमारी अस्पतालमै हुनुहुन्छ ।
यामकुमारीको आफन्त तथा साथीभाइ कसैसँग पनि सम्पर्क छैन । रोजगारदाता व्यक्ति पनि अस्पतालमा नआएको ब’करले जानकारी दिनुभयो । गएको चार महिनादेखि यामकुमारीलाई आफन्त, साथीभाइ तथा रोजगारदातासँग भे’टाउन प्रयास गरिरहे पनि कोहीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । ब’करले गल्फ न्यूजसँग बताएअनुसार यामकुमारीलाई अक्टोबरको तेस्रो हप्ता अ’चेत अवस्थामा ए’म्बुलेन्समा राखेर दुबई अस्पताल पुर्याइएको थियो ।ल्या’उनेबेला अ’चेत अवस्थामा भए पनि हो’श आइसकेपछि यामकुमारीले बा’न्ता गरिरहने र टाउको दु’ख्ने गरेको बताउने गरेकी थिइन् । मे’डिकल रि’पोर्टअनुसार म’स्तिष्कमा र’क्तश्राव भएको देखिएको छ ।
अहिले पनि यामकुमारीलाई टाउको दु’ख्ने र ज्व’रो आउने स’मस्या छ ।सामाजिक अभियन्ता ब’करका अनुसार फेब्रुअरी १७ अर्थात आज सोमबार यामकुमारीको अस्पतालबाट डि’स्चार्ज गर्नुपर्ने हो । तर कोही पनि स’म्पर्कमा नआएपछि यामकुमारीलाई आफूसँगै रा’ख्नुबाहेक अरु कुनै उ’पाय नभएको ब’करले बताउनुभएको छ । यामकुमारीले आफ्नो एउटा छोरा छ भ’न्नेबाहेक अरु केही जानकारी दिन स’क्नुभएको छैन । यामकुमारीले दुबईमै एक अ’रबी परिवारमा घ’रेलु का’मदारको रुपमा काम गरेको हुनसक्ने अ’नुमान गरिएको छ ।